लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज फुलपातिको दिन ह्वात्तै घट्यो: हेर्नुहोस कति पुग्यो ! - jagritikhabar.com
लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज फुलपातिको दिन ह्वात्तै घट्यो: हेर्नुहोस कति पुग्यो !
काठमाडौं , १६ मंसिर ।
आज फुलपातिको दिन बजारमा सुनको मुल्यमा गिरावट । हेर्नुहोस कतिमा हुदैछ कारोबार ।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलमा ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो तोलामा ९४ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज शुक्रबार २०० रुपैयाँले घटेर तोलामा ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाएको छ ।
विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ डेरी ब्रान्डले नेपाल प्रबेश गरेको छ । नेपालको लागि आधिकारीक वितरक अटोहोस्टले नेपाल ल्याएको यी डेरी ब्राण्डले दुई मोडलको बिक्री सुरु गरेको छ ।
कम्पनीले ल्याएको नयाँ कार इभी ७ र इएम ७ मोडल इलेक्ट्रीक तथा सोलार जडान भएका कार हुन् । यो नेपालको लागि सोलार जडान भएको पहिलो आकर्षक कार हो । विशेषत सहरी क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै आएका यी कार आजैबाट बिक्री सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
इभी ७ इलेक्ट्रीक मोडल हो भने इएम ७ इलेक्ट्रीक र सोलारबाट चल्ने छ । इभी ७ मोडलमा कम्पनीले १५० एम्पीयर आवरको लिथियम आयोन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । यी कारले एक पटकको फुल चार्जमा १५८ किलोमिटर रेञ्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
सोलार प्यानल जडान भएको इएम ७ को रेञ्ज भने केहि बढी रहेको छ । यसले फुल चार्जमा १७४ किलोमिटर रेञ्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । दुबै कारको उच्चगति क्षमता ६० किमि प्रतिघण्टा रहेको छ ।
१७० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका यी कार मूल्यका हिसावले उत्कृष्ट रहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको अनुसार इभी ७ को मूल्य २५ लाख ९९ हजार र इएम ७ को २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । सुरुमा गाडी किन्ने ५० जनाले नगद ५० हजार रुपैयाँ छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
गाडीको साइज पनि आकर्षक रहेको छ । ह्याचव्याक डिजाइनमा आएको यी कार मध्ये इभी ७ को लम्बाई ३४८० एमएम, चौडाई १५७० एमएम र उचाई पनि १५७० एम रहेको छ भने ह्वीलवेस २२९७ एमएमको रहेको छ ।
इएम ७ अझै छोटो रहेको छ । यसको लम्बाई ३३८० एमएम, चौडाई १५५० एमएम र उचाई १५०० एमएम मात्रै छ भने यसको ह्वीलवेस २२६० एमएम रहेको छ ।
यी कारमा हिल एसिस्ट, पावर विन्डो, एसी, हिटर, टचस्कृन, रियर भ्यू क्यामेरा, सेन्ट्रल लक, रिमोट कि, अलोय ह्वील जस्ता फिचर दिइएको छ ।